News Collection: कस्तो बेलाको सम्पर्कले गर्भ रहन्छ ?
म २२ वर्षीय अविवाहित युवती हुँ। केही दिनअघि एउटा केटासँग यौनसम्पर्क भयो। मेरो समस्या के हो भने जब मेरो साथीसँग सम्पर्क भयो त्यो दिनदेखि तल्लो पेट दुखिरहेको छ। किन होला ? हामीले कुनै साधन पनि प्रयोग गरेका थिएनौं। त्यस दिन मेरो महिनावारी भएको ११ दिन भएको थियो। मलाई डर छ, कतै गर्भ रहने त होइन ? कस्तो बेलाको सम्पर्कले गर्भ रहन्छ ? गर्भ रहिहाले त्यसको समाधान कसरी गर्ने
आशा गर्छु, तपाईंले यौनसम्पर्क गरेको केटा नै तपाईंको साथी हो र उहाँसँग घनिष्ठ सम्बन्ध होला। अर्कातर्फ विवाहभन्दा पहिले नै यौनसम्पर्क राख्नुका आफ्नै असजिला छन्। तपाईंको जस्तो युवावस्थामा यौनइच्छा एकदमै तीव्र हुनु स्वाभाविक हो। त्यसलाई शान्त पार्ने उपाय खोज्नु पनि स्वाभाविक नै हो। कतिपय स्थितिमा नवयुवाहरू अर्को व्यक्तिसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न तथा यौनसम्पर्कका लागि आवश्यक रूपमा तयार हुँदैनन्। अर्को व्यक्तिसँग सम्बन्ध विकास गर्न कति गहिराइसम्म पुगिन्छ भन्ने अनुमान उनीहरू सहजै गर्न पनि सक्दैनन् भने अर्कातिर कति पुगेपछि रोक्नु उचित हुन्छ भन्ने कुरा पनि विवेकपूर्ण रूपमा ठम्याउन सक्दैनन्। ज्ञान भए पनि आवश्यक सीप नहुन सक्छ।
पुरानो प्रकृतिको ग्रामीण समाजमा होस् वा आधुनिक सहरी समाजमा युवायुवतीहरूले एक-अर्कामा सम्बन्ध विकास गर्ने विभिन्न अवसर प्राप्त हुने वातावरण हुन्छ। यस्तो बेलामा कसरी सही निर्णय लिने भन्ने सीप हुनु नै मुख्य कुरा हो। यदि स्थिति ठीक छैन भने यौनसम्पर्क नै नगर्ने भन्ने निर्णय पनि लिन सक्नुपर्छ। आफूलाई इच्छा नभए पनि यौनसम्पर्कको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुले निर्णय क्षमताको कमीलाई संकेत गर्छ। आइपर्न सक्ने यस्तो स्थितिका लागि तयार नहुँदा नै दुर्घटना हुन्छ र त्यसको क्षति पनि बढी हुनसक्छ। प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी दुर्घटना पनि यस्तै हो। योजनाबद्ध नहुने भएकाले भैपरी हुने यौनसम्पर्कमा जहिले पनि दुर्घटनाको जोखिम बढी हुन सक्छ। तपाईंहरू दुवैले कुनै गर्भनिरोधको साधन प्रयोग नगर्नु पनि एक किसिमको अपरिपक्वता हो।
यस किसिमको असुरक्षित यौनसम्पर्क भएपछि पनि गर्भ नरहोस् भनेर गर्भ निरोधका उपाय अपनाउन सकिन्छ। गर्भ निरोधको खाने चक्की नै पनि आकस्मिक गर्भनिरोधका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यौनसम्पर्क भएको जति सक्यो चाँडो यसको पहिलो मात्रा लिनुपर्छ। पहिलो मात्रा यौन सम्पर्क भएको १ सय २० घण्टा (५ दिनभित्र) लिइसक्नुपर्छ। अर्को मात्रा पहिलो मात्रा लिएको १२ घण्टामा लिनुपर्छ। यसरी १२ घण्टाको फरकमा दुई पटक औषधी लिए पुग्छ। त्यसैले दोस्रो मात्रा लिन सजिलो समयका बारेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।